Isu tinopa yedu inobatsira bhuku reGerman bhuku re9th giredhi, 10th giredhi uye vadzidzi vechikoro chesekondari zvavo. Unogona kushandisa nyore nyore bhuku redu reGerman, ratakaronga seE-Book, pakombuta yako kana pafoni yako.
Bhuku redu rekuGerman haringori bhuku rekuwedzera revadzidzi vechikoro chesekondari, asiwo bhuku rekudzidza reGerman kune vanotanga kudzidza chiGerman.
Bhuku redu rekudzidza reGerman, rakaburitswa pasi pezita reWir lernen Deutsch (WLD), rinowanikwa kutengeswa paGoogle Play Market.
Mubhuku redu reGerman, yakakurumbira uye inokosheswa hurukuro uye inonzwisisika hurukuro dzeTurkey dzinoshandiswa. Paunenge uchiverenga bhuku redu, iwe unonzwa kunge paine mudzidzisi pamberi pako. Bhuku redu rekudzidza reGerman rinotsigirwa nezvakawanda zvinoonekwa uye mienzaniso.
Unogona kuongorora bhuku redu mahara usati watenga.
DZVANYA PANO KUTAURA KANA KUTENGA KUTENGA BHUKU REDU GERMAN COURSE BHUKU
Bhuku redu reGerman rakatumidzwa zita rekuti Wir lernen Deutsch (WLD) rinogona kushandiswa senge rinowedzera bhuku reGerman revadzidzi vegiredhi repfumbamwe, rinogona zvakare kushandiswa senge bhuku reGerman revadzidzi vegiredhi regumi nekuti rinosanganisira zvidzidzo zvegiredhi regumi. Iyo inogona kutoshandiswa sechinhu chinobatsira kwazvo uye chinodzidzisa chevadzidzi vegiredhi regumi neregumi nemaviri negurombo reGerman
Kunze kwevadzidzi vechikoro chesekondari, avo vasingaende chero chikoro kana chero kosi yechiGerman vanogona kushandisa bhuku redu rekuGerman kudzidza kudzidza chiGerman voga. Bhuku redu rakagadzirwa nevanhu vasingataure chero chiGerman mupfungwa uye zvidzidzo zveGerman zvinotanga kubva pakutanga. Nekudaro, avo vatsva pakudzidza chiGerman kana avo vasingazive chero chiGerman vachakwanisa kudzidza nyore chiGerman kubva mubhuku redu.
Kusiyana nemamwe mabhuku mumusika, bhuku redu rine mavara uye rine mifananidzo rakapa kukosha kukuru kune zvinoonekwa. Bhuku redu rakagadzirirwa richitarisa avo vasingataure chero chiGerman, kureva kuti, avo vanotanga kubva pakutanga, uye hurukuro dzedu dzakagadzirirwa nenzira yakajeka, yakajeka uye inonzwisisika, tichifunga nezve avo vakatora zvidzidzo zveGerman kekutanga.
NHAU MUGERMAN COURSE BHUKU
Bhuku redu, iro riri bhuku revadzidzi vechikoro chesekondari uye bhuku rekuGerman rekudzidza kune avo vanoda kudzidza ChiGerman vari vega, rinosanganisira misoro inotevera:
GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 1
Zvinyorwa zveGerman zvakasarudzika
ChiGermany chisina kutaurwa
Nyore mutongo kumisikidzwa muchiGerman
Mazita echiGerman mazhinji
Zvakawanda mitsara muchiGerman
Mitsara yakatwasuka muchiGerman
Mitsara isina kunaka muchiGerman
GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 2:
Chirevo chechiGerman chirevo
German pronounsive pronouns
Kuzivisa mhuri yedu yeGerman
ChiGerman zita -i (Akkusativ)
ChiGerman zita (Dativ)
Nguva dzechiGerman: nguva iripo muchiGerman
Iva nechiGerman (chiito haben)
Imba yedu yeGerman
German german items
Ngatitaurirei imba yedu muchiGerman
Nguo dzeGerman uye zvipfeko
ChiGerman mitsara yekutenga
GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 3:
Kugadzirira kweA1 Mhuri Kubatanidzazve Bvunzo
ChiGerman chekutanga uye chekutanga mitsara
Kwaziso dzeGerman nemitsara yekuonekana
Yekutanga mibvunzo uye mhinduro muchiGerman
Mirairo yeGerman uye zvikumbiro
Zvinyorwa zveGerman uye kuverenga kwekunzwisisa maitiro
Tsamba yekunyora maitiro muchiGerman
DZVANYA PANO KUTI UVERENGE MACOMMENTS NEZVEDU BHUKU
MIMWE MIKOMO NEZVEDU BHUKU REDU
Mhinduro pane Yedu yeGerman Kudzidza Bhuku
Ongororo dzinotorwa kubva kuGoogle Play Market.
# NHAU MUGERMAN COURSE BHUKU
# GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 1
# GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 2:
# GERMAN COURSE BHUKU CHIKAMU 3:
# MIMWE MIKOMO NEZVEDU BHUKU REDU
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi nemaviri yapfuura, musi wa12 Zvita 09, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa2020 Zvita 14.
Nguva Yemushandirapamwe muDuramazwi reMagetsi
German Sample Smart Board Chikumbiro
Our Android App is Online
Tags: 10. kirasi german bhuku, 10. kirasi zvidzidzo zvese, 10. kirasi german nyaya inotaura, 10th grade german bhuku rekubatsira